Muchidzidzo chino chenhamba dzeGerman, ticharatidza nhamba dzeGerman kubva pa1 kusvika pa100. Mukuenderera mberi kwechidzidzo chedu, tichaona nhamba dzeGermany mushure mezana, tichaenda mberi zvishoma uye kudzidza nhamba dzeGermany kusvika ku100. Nhamba dzeGerman Die Zahlen inoratidzwa se.
Hurukuro yenhamba dzechiGerman inowanzova imwe yezvidzidzo zvekutanga zvinodzidzwa nevadzidzi vanotanga kudzidza chiGerman, munyika medu inodzidziswa kugiredhi rechipfumbamwe muzvidzidzo zveGerman, uye nhamba dzepamusoro dzeGerman dzinodzidziswa mumagiredhi egumi. Nyaya yenhamba muGerman haina kuoma kudzidza, asi inyaya inoda kudzokororwa kwakawanda.
Tichatanga kuona nhamba kusvika ku100 muchiGermany, zvino tichaona nhamba kusvika kune chiuru muchiGermany, zvino tichashandisa ruzivo urwu rwatakadzidza nhanho nhanho kusvika kumamiriyoni uye kunyange mamiriyoni. tichadzidza nhamba dzeGermany kusvika kumabhiriyoni. Zvakakosha kudzidza chiGerman chenhamba, nokuti nhamba dzinoshandiswa kakawanda muupenyu hwezuva nezuva. Paunenge uchidzidza nhamba dzeGerman, haufanirwe kudzienzanisa nenhamba dzeTurkey kana nhamba dzeChirungu. Enzaniso kana kuenzanisa kunoitwa nenzira iyi kungatungamirira kukudzidza kusina kururama.
Nyaya yehurumende dzeGermany, iyo inogara ichishandiswa kose-kose uye muupenyu hwezuva nezuva, inofanira kudzidzwa zvakanaka, kuti nhamba dzakagadzirwa sei dzinofanira kunzwisiswa uye nhamba dzechiGermany dzinofanira kuverengwa uye kuitwazve.
Shamwari dzinodiwa, German unowanzo kuve mutauro wakanangana nerote, kune zvakawanda zvakasiyiwa uye izvi zvinosara zvinoda kunyatsoyeukwa.
Nhamba dzeGerman Zviri nyore kudzidza, haina dambudziko rakawanda, mushure mekudzidza pfungwa, unogona kunyora nyore manhamba maviri-manhamba, matatu-manhamba, mana-manhamba uye akawanda manhamba eGerman wega.
Zvino ngatitangei kuona nhamba dzeGerman dzine mifananidzo, tozodzidza manhamba eGerman kubva pane imwe kusvika kune zana.
Nhamba dzeGerman Kusvika pagumi (neMufananidzo)
GERMAN NUMBERS 0 NULL
GERMAN NAMBA 3 DREI
GERMAN NAMBA 4 VIER
GERMAN NAMBA 6 SECHS
GERMAN NAMBA 7 SIEBEN
GERMAN NAMBA 9 NEUN
German 1 ku 100 Numeri
Vadiwa shamwari, Izwi rekuti Zahlen rinoreva nhamba muchiGerman. Nhamba dzekuverenga, iwo manhamba atichadzidza izvozvi, anonzi Kardinalzahlen. Manhamba enhengo dzakadai sekutanga, wechipiri newechitatu anonzi Ordinalzahlen muchiGerman.
Iye zvino ngatitangei kudzidza chiverengero chekuverenga chiGermany, chatinoti Kardinalzahlen.
Numeri inyaya yakakosha muchiGerman, semitauro yese. Inoda kunyatsodzidziswa nekuisa mumusoro. Nekudaro, mushure mekudzidza, zvakafanira kusimbisa iyo ruzivo rwakadzidzwa neakawanda maitiro uye kudzokorora. Iwo maekisesaizi akawandisa pane ino nyaya, inokurumidza uye nekunyatso nhamba inodiwa ichadudzirwa muchiGerman.
Mushure mekuziva manhamba ari pakati pe0-100 atinozoona pakutanga, unogona kudzidza manhamba mushure memeso. Zvisinei, zvakakosha kuti unyatsoongorora nekuisa mumusoro zvinhu izvi. Pane yedu saiti, nyaya yenhamba muchiGerman inowanikwawo mu mp3 fomati. Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kutsvaga saiti uye kuwana edu ekuteerera eGerman zvidzidzo mune mp3 fomati.
Chokutanga pane zvose, ngatitaurei nezvemajeri echiGermany zvatakagadzirira iwe uye titenderei titange nhamba dzedu dzeGermany:
Zvino ngationei tafura yezviGermany nhamba kubva kune imwe kusvika makumi maviri:
3 kolmessa 13 kolmessazehn
4 vana 14 vanazehn
Iye zvino ngationei nhamba idzi, dzatakadzidza, pamwe chete nekuverenga kwavo pachavo mune urongwa:
0: hapana (nhu)
1: the eins (ayns)
2: nyikai (svay)
7: sieben (zi: chiuru)
Mune nhamba dzataurwa pamusoro apa, teerera kune ropafadzo iyo iyo mazita e16 uye 17 ane inopelling, kureva tsamba (6 uye 7 nhamba).
Uchaona kuti sieben => sieb uye sechs => sech)
Nhamba idzi mushure memakumi maviri dzinowanikwa nekuisa shoko rokuti "und gelen rinoreva" uye arasına pakati peumwe.
Nekudaro, kusiyana neTurkish, iwo manhamba akanyorwa kutanga, kwete iwo iwo digit. Yakagadzirirwa naMuharrem Efe.
Pamusoro pezvo, chinhu chimwe chete chaunofanirwa kutarisisa apa izwi rekuti eins, iro rinoreva iyo nhamba 1 (one), inoshandiswa se ein pakunyora dzimwe nhamba. Semuyenzaniso 1 kana tichizonyora eins tinonyora semuenzaniso 21 Kana tichizonyora ipapo makumi maviri nerimwe birof munhu Tinonyora se.
Kana iwe ukatarisa mufananidzo uri pasi apa, unogona kunzwisisa nyore nyore kuti unganyora sei nhamba yekupedzisira muGermany.
Kuverenga Numeri muchiGerman
Sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pamusoro apa, zvakasiyana neTurkey, hazvina kunyorwa kare maverengi asi zvisati zvawanda.
Zvino ngationei nhamba dzeGermany kubva ku20 kusvika ku40 iri patafura:
GERMAN NUMBERS (20-40)
22 zwei und zwanzig 32 pasii uye dreißig
Iye zvino ngatinyorwei nhamba pakati pe20 ne40 muchiGermany pamwechete nematauro avo:
21: ein und zwanzig (akaparadzana neshamwari) (rimwe makumi maviri = makumi maviri nerimwe)
22: zwei und zwanzig (svay und svansig) (maviri nemakumi maviri = makumi maviri nemaviri)
23: drei und zwanzig (dray und svansig) (makumi maviri nematatu = makumi maviri nematatu)
24: vier und zwanzig (fi: und und zwanzig) (makumi mana nemana = makumi maviri nemana)
25: fünf und zwanzig (fünf und svansig) (makumi mashanu nemakumi maviri = makumi maviri nemashanu)
26: sechs und zwanzig (zeks und svansig) (makumi maviri nemakumi maviri = makumi maviri nematanhatu)
27: sieben und zwanzig (zi: bin und svansig) (makumi maviri nemanomwe = makumi maviri nemanomwe)
28: acht und zwanzig (aht und svansig) (masere makumi maviri nemasere = makumi maviri nemasere)
29: neun und zwanzig (noyn und svansig) (makumi mapfumbamwe nemakumi maviri = makumi maviri nemapfumbamwe)
31: einunddreißig (akaparadzanisa und drasisig)
35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig) By Muharrem Efe
Mushure memakumi maviri German numberspakati peavo nemakumi "ve"Zvinoreva"uyeInowanikwa nekuisa izwi ". Nekudaro, pano muTurkey, iwo mauniti edijiti anonyorwa kutanga, kwete gumi remadhijiti, kusiyana nezvatinonyora.. Mune mamwe mazwi, nhamba iri mumadhijiti edijiti ndiyo inotanga kutaurwa, kozoti iyo nhamba iri mumakumi emadhijiti inonzi.
Sezvauri kuona pano, isu tinotanga tanyora nhamba munzvimbo imwechete, wedzera izwi rekuti "und" uye tinyore makumi emadhijiti. Mutemo uyu unoshanda kune ese manhamba anosvika zana (30-40-50-60-70-80-90 zvakare), saka mauniti edijiti ndiwo anotanga kutaurwa, ipapo makumi emadhijiti.
Nenzira, isu takanyora manhamba echiGerman zvakasiyana (semuenzaniso neun und zwanzig) kuti zvijeke uye zvinzwisisike, asi chaizvo idzi nhamba dzakanyorwa pamwechete. (semuenzaniso: neunundzwanzig).
Iwe unoziva kuverenga gumi negumi, handiti? Zvakanaka. Iye zvino tichaita izvi muchiGerman. Ngativerengei manhamba echiGerman gumi negumi.
GERMAN YAKASIMBISA HUMBUDZO
Ngationei nhamba dzechiGermany nerunyorwa rwemazita akakodzera:
Uyewo ona musiyano mukunyora kwemazita 30,60 uye 70 pamusoro. Nhamba idzi dzinogara dzakanyorwa nenzira iyi.
Zvino ngatisiyei katsamba pazasi kuti tione zvirinani aya masipereti mutsauko:
ChiGerman Numeri Cherekedza
Iye zvino zvatakadzidza manhamba ekupedzisira kubva ku100 kusvika kuGermany, tinogona kunyora nhamba dzeGermany kubva ku1 kusvika ku100.
1 ku100 German Numeri Table
ZVINHU ZVOSE ZVIRI KUGERMAN 1 kusvika 100
3 kolmessa 53 drei und fünfzig
4 vana 54 vier und fünfzig
12 zwölfte 62 pasii und sechzig
22 zwei und zwanzig 72 panoi und siebzig
32 pasii uye dreißig 82 zwei und achtzig
42 panoi und vierzig 92 muno ne undunziunzi
50 fünfzig 100 seteleitä
Chenjera: Kazhinji, nhamba muchiGerman dzakanyorwa padhuze, saka muhupenyu hwezuva nezuva, semuenzaniso 97 nhamba sieben und neunzig kwete muchimiro siebenundneunzig Nekudaro, isu takanyora zvakasiyana pano kuti zvionekwe zvakajeka uye zviri nyore kubata nemusoro.
Nhamba kusvika ku1000 muchiGerman
Iye zvino ngatirambei tichiine nhamba dzeGermany mushure me100.
Heino pfungwa yatinoda kubuda; Kazhinji, nhamba dzakanyorwa zvakanyanyisa, asi takasarudza kunyora nhamba idzi zvakasiyana kuitira kuti dzinzwisiswe zviri nyore pano.
Zvino ngatitange kubva ku100:
100 inomiririra pasi pe hundert da muGermany Nhamba dze200-300-400 dzakadaro dzinotangira neshoko pasi pe hundert X. Izwi hundert (chiso) rinogona kushandiswa se "ein hundert".
Iwe unogona kuona zvose.
200: zwei hundert (svay hundert) (mazana maviri)
300: drei hundert (dray hundert) (katatu-chiso)
400: vier hundert (fi: hundert) (mazana mana)
500: fünf hundert (mazana mashanu)
600: sechs hundert (mazana matanhatu)
700: sieben hundert (zi: bu hundert) (mazana manomwe)
800: acht hundert (aht hundert) (masere nemazana)
900: neun hundert (noyn hundert) (mapfumbamwe nemakumi)
Asi, somuenzaniso, kana iwe uchida kunyora 115 kana 268 kana imwe imwe nhamba yechiso, iyi ndiyo nhamba yezviitiko uye zvino tinonyora nhamba uye ipapo nhamba.
110: hundert zehn (zana nemakumi)
111: hundert elf (chiso negumi nerimwe)
112: hundert zwölf (chiso uye gumi nembiri)
113: hundert dreizehn (chiso uye gumi nevatatu)
114: hundert vierzehn (chiso uye gumi nemana)
120: hundert zwanzig (zana nemakumi maviri)
121: hundert ein und zwanzig (zana nemakumi maviri nerimwe)
122: hundert zwei und zwanzig (zana nemakumi maviri nemaviri)
150: hundert füfzig (chiso ne makumi mashanu)
201: zwei hundert eins (mazana maviri nerimwe)
210: zwei hundert zehn (mazana maviri nemakumi)
225: zwei hundert fünf und zwanzig (mazana maviri namakumi maviri namashanu)
350: drei hundert fünfzig (mazana matatu namakumi mashanu)
598: fuyf hundert acht und neunzig (mazana mashanu negumi nemapfumbamwe)
666: Vana mazana matanhatu navatanhatu;
999: neun hundert neun und neunzig (mazana mapfumbamwe nemapfumbamwe)
Paunenge uchinyora matatu-manhamba manhamba, ndokuti, manhamba ane mazana, muchiGerman Kutanga chikamu chechiso chakanyorwa, ipapo iyo manhamba maviri manhamba anonyorwa sekuona kwedu pamusoro.
semuenzaniso 120 Kana isu tichatanga tataura ein hundert isu tichati, shure kwaizvozvo zwanzig Saka isu tichati ein hundert zwanzig achiti 120 isu tichati.
semuenzaniso 145 Kana isu tichatanga tataura ein hundert isu tichati, saka funfundvierzig Saka isu tichati ein hundert funfundvierzig achiti 145 isu tichati.
semuenzaniso 250 Kana isu tichatanga tataura zvei hundert isu tichati, saka fünfzig Saka isu tichati zwei hundert funfzig Tichati 250 tichiti.
semuenzaniso 369 Kana isu tichatanga tataura drei hundert isu tichati, saka neuundsechzig Saka isu tichati drei hundert enunundsechzig Tichati 369 tichiti.
Zviuru zvamazana zvakagadzirwa zvakafanana nesiso nhamba.
2000: Nyikai tausend
Ona zvakare iyo mienzaniso pazasi.
46000 : sechs uye vierzig tausend
57000 : sieben uye fünfzig tausend
Heino vane zviuru gumi, gumi nezviviri nezviuru, zvitatu zvine gumi nezvitatu, gumi nezvina ...
Sezvauri kuona iwe uchiratidzira iwo manhamba, maviri-manhamba manhamba uye iyo zviuru zviuru zvinobatanidzwa. Pano zvakare, tinowana nhamba yedu nekutanga kuunza nhamba yedu yemadhigirii maviri uyezve neshoko rekuti chiuru.
Iye zvino ngatirambei tichifamba nemakumi ezviuru zvemienzaniso:
21000: ein und zwanzig tausend (makumi maviri nechiuru chimwe)
22000: zwei und zwanzig tausend (makumi maviri nechiuru chimwe)
23000: drei und zwanzig tausend (makumi maviri nematatu-chiuru)
30000: dreißig tausend (makumi matatu nezviuru)
35000: fünf und dreißig tausend (makumi matatu nemazana mashanu)
40000: vierzig tausend (makumi mana nezviuru)
50000: fünfzig tausend (makumi mashanu-bin)
90000: neunzig tausend (makumi mapfumbamwe nemazana)
100000: hundert tausend (zana zana)
ChiGermany Chimwe Chiuru Chiuru Nhamba
Mamiriro acho akafanana muGermany mazana zviuru.
110000: hundert zehn tausend (zana-chiuru)
120000: hundert zwanzig tausend (zana nemakumi maviri)
200000: zwei hundert tausend (mazana maviri nechiuru chimwe)
250000: zwei hundert fünfzig tausend (mazana maviri nechiuru chimwe)
500000: fuyf hundert tausend (mazana mashanu nezviuru)
900000: neun hundert tausend (mazana mapfumbamwe nezviuru)
200000 : zvei hundert tausend
Kuti tibatanidze izvo zvatakadzidza kusvika ikozvino, tinogona kutaura nekutaura;
Paunonyora nhamba mbiri-nhamba, kutanga nhamba yekutanga uye ipapo chipiri chechipiri chakanyorerwa neshoko und.
Munhamba dzenhamba nhatu semuenzaniso nhamba yezana neshanu (105) inonyorwa nekuwedzera nhamba zana kozoti shanu.Chiverengo zana nemakumi maviri chinoumbwa nekunyora nhamba zana uyezve makumi maviri. zviuru zvenhamba, semuenzaniso, nhamba zviuru zvitatu (3000) inoumbwa nekutanga kunyora nhatu uyezve churu. Chiverengo chechuru nenhatu chinoumbwa nekunyora churu netatu.Chiverengo 3456 (zvuru zvitatu nemazana mana nemakumi mashanu nenhanhatu) chinoumbwa nekutanga kunyora zviuru zvitatu, kozoita mazana mana kozoti makumi mashanu nenhanhatu.Yakagadzirirwa naMuharrem Efe.
Nhamba huru dzakanyorwa nenzira imwechete, kubva pachitamba chekutanga.
Chaizvoizvo, nhamba dziri nyore kwazvo muchiGerman. Iwe unongoda chete kuziva manhamba kubva 1 kusvika 19 uye iwo manhamba 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1.000 uye 1.000.000. Zvimwe zvinongoratidzwa nekukwiridzirwa kwenhamba idzi.
Kunyanya kudzidzira kwaunoita mumitauro yeGermany, zviri nani zvigaro zviri mumashoko ekudzidza nekuchengeta mupfungwa, pamwe nekushandura nhamba kuTurkey neGermany nokukurumidza.
Mamiriyoni Mamiriyoni Numeri
MuchiGermany, 1 yakanyorwa nenzira yeMillion Mamioni.Kuisa nhamba pamberi pezwi Million, tinokwanisa kuzadzikisa kuchinja kwatinoda.
Paunotarisa mienzaniso iri pasi apa, uchaona kuti zviri nyore sei.
eine Million: 1.000.000 (Mamiriyoni mumwe)
zwei Milloon: 2.000.000 (Mamiriyoni maviri)
drei Milloon: 3.000.000 (Mamiriyoni matatu)
viro Milloon: 4.000.000 (mamiriyoni mana)
1.200.000: Eine Million zwei hundert tausend (mamiriyoni maviri nemazana mazana ezviuru)
1.250.000: eine Million zwei hundert fünfzig tausend (mamiriyoni rimwe nemazana maviri nemakumi mashanu zviuru)
3.500.000: drei Million fünf hundert tausend (Mamiriyoni matatu nemazana mashanu nemazana zviuru)
4.900.000: Million neun hundert tausend (Mamiriyoni mana mazana mapfumbamwe mazana mapfumbamwe)
15.500.000: fünfzehn Million fünf hundert tausend (Mamiriyoni gumi nemashanu nemazana mashanu nemazana)
98.765.432: Mamiriyoni gumi nemasere masere nemazana manomwe nemakumi matanhatu nemashanu zvuru nemazana mana makumi matatu nemaviri (mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemasere mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvishanu nemazana mana nemakumi matatu nemaviri)
Kana iwe wakanzwisisa manzwisisiro emuenzaniso uri pamusoro apa, unogona nyore kunyora uye utaure nhamba dzose kusvika mabhiriyoni muGermany.
Kudzidzira neNhamba muGerman
Kupesana nenhamba dziri pazasi GermanNyora pasi:
Nenzira iyi, takaongorora nekupedza mazita echiGerman mune zvose.
German Numbers: Mubvunzo Mhinduro
Ndedzipi nhamba kubva pa1 kusvika ku20 muchiGerman?
10. kirasi german nyaya inotaura10. kirasi nhamba dzechiermanNhamba dzeGermany kusvika ku1009. kirasi german nyaya inotaura9. kirasi nhamba dzechierman9. kirasi german nhamba nhauriranoGerman numbersNhamba dzeGermany kusvika ku100chimiro chechi German chiitochi German chidzidzo chidzidzokudzidzira pamitauro yechiermanchimiro chechierman kardinalzahlennhamba dzechiGermany dzinopikisa nyayanhamba dzechi German kusvika kune zanaGermanGerman numbersnhamba muchi Germankusvika kuzana zana nhamba dzechi German
Mehmet anodaro 9 apfuura
Ndinokutendai zvikuru nekugovera uku. Ndinokutendai ...
arda anodaro 9 apfuura
Gunyana anodaro 9 apfuura
kubwinya anodaro 8 apfuura
Zvechokwadi nzvimbo yakanaka yezvikoro zvepamusoro, kutarisira utano
Ndinokutendai nzvimbo yakanaka kwazvo muTsk
Ona Zehra's Full Profile anodaro 8 apfuura
Utano mumaoko ako hwakanaka
Selin anodaro 8 apfuura
Ndinokutendai zvikuru nokuda kwetsanangudzo yenyu.
Great br.n chimiro cheboka re6 rakaverengwa zvakare ini ndiri kutowana maawa 2
Zvinotevera anodaro 8 apfuura
76: sechs und siebzig ndinofunga kuti pane chikanganiso apa… 🙂
dema rakaipa anodaro 8 apfuura
sa mudzidzisi, ndingadzibata sei nemusoro, ndipeiwo zano
Ndinoshuva kuti iwe unogona kutsanangura nhamba dzemadhijiti matatu zvakare
almancax anodaro 7 apfuura
Mhoroi, chidzidzo chinotevera chidzidzo ichi chiGerman chine manhamba matatu, ndapota teverai zvidzidzo muhurongwa, chidzidzo chenhamba dzeGerman chinotsanangurwa nemienzaniso inosvika miriyoni.
Zviri nani uraramewo panhamba idzi dzakasiyana
Ugur anodaro 7 apfuura
Gumiguru 29, 2014 Date: 18:56
Hapana kukanganisa shamwari apa.
ndinokutendai, takadzidza pabvunzo ndinokutendai
o anodaro 7 apfuura
Maita basa nepeji yakadai, inobatsira zvikuru google+ kana kuti takakumirirai
sdrfgdrfygdf anodaro 7 apfuura
melissa sucicek anodaro 7 apfuura
1 kusvika ku100 kubva ku40 kusvika kumapurisa akaoma mutezo isu tichatanga kudzidziswa pakutanga kweratidza zvinowedzera!
Mine Ay anodaro 7 apfuura
Unogona here kutsanangura nemienzaniso "Nhamba dzeOrdinal zvipikisheni uye dzakabatanidzwa sezvipikisi"?
kusvikira j.mukw anodaro 6 apfuura
Mashoko ake akanga ari nyore uye anonzwisisika. Ndinozvikoshesa.
Bata Halit zvakananga anodaro 6 apfuura
Zvimwe zvekuverenga hazvikwanisi kuverengwa saR kana izwi rechizvinyorwa rechiGiriki rine r kumagumo. somuenzaniso vier fiya
iye oga ndiye achava fia
Haagoni kuverengwa ari oga, asi haagoni kuverenga tmm kana kuti zvakare? Fia akaverenga? Okay
Sait anodaro 6 apfuura
Nzira yekudana sei 10 buch muchiGerman
Zita zehn halb iye ndiri kugara muGermany uye ini ndakaberekerwa pano
Hazal anodaro 6 apfuura
Zvechokwadi nzvimbo yakanaka kwazvo. Utano mumaoko evanhu vose vanobatanidzwa?
Handina kuona chidzidzo kusvikira chiGerman chinyorwa bittmedem ichi chakatangwa amk jerkers haakwanisi kuudza bidet amk allah kuita sezvamunoziva 2 chikoro chekunamata chi shit
Chii chinonzi 899
ECE anodaro 5 apfuura
remzi anodaro 5 apfuura
Mangani mangwana 91 inoda
Unoziva here kunyora 1394?
ilkerxnumx anodaro 5 apfuura
ein tausend drei hundert vier und neunzig (pronounced = iyo tavzınt dray hundert fi: ır und noynsig)
kuchema anodaro 5 apfuura
Nhamba ye875943 yakanyorwa sei mumagwaro?
kusazivikanwa anodaro 1 apfuura
3 MAKORE APERA
wannabe anodaro 3 apfuura
SERRAT anodaro 2 ago
KUTAURWA INOSHAMISA NYAYA YECHIJERUMANI! PERFECT.